अर्डरली भनेको के हो | गठन र अध्ययन
हेरचाह गर्ने व्यक्तिको स्वास्थ्य क्षेत्र भित्र महत्त्वपूर्ण र आवश्यक भूमिका हुन्छ। हेरचाहकर्ताले यो सुनिश्चित गर्दछ कि सबै बिरामीहरू स्वास्थ्य केन्द्रको भित्र हुँदा नै उनीहरू ठीक छन् र उक्त केन्द्रको सबै नियम र कानूनको पालना गरिएको छ कि अवलोकन गर्ने कार्य पनि छ।
अर्को लेखमा हामी तपाइँसँग अर्डरलीको र फिगरको बारेमा अझ विस्तृत रूपमा कुरा गर्नेछौं कसरी पहुँच गर्ने सार्वजनिक स्थिति।
1 एक हेरचाहकर्ता को कार्य के हो?
2 वार्डनको स्थिति कसरी पहुँच गर्ने
एक हेरचाहकर्ता को कार्य के हो?
हामीले माथि माथि सूचित गरिसक्यौं, अर्डरलीको मुख्य कार्य बिरामीहरूको कल्याण सुनिश्चित गर्न बाहेक अरू कुनै कुरा होइन। अधिक विशिष्ट र विस्तृत तरिकामा, वार्डनले निम्न कार्यहरू गर्दछ जुन हामीले सूची गर्छौं:
यसले सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उनीहरूको काम गर्न मद्दत गर्दछ र उनीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण समर्थन हो। यस तरिकाले, आवश्यक भएमा, तिनीहरू खान, धुने वा बिरामीहरूका कुनै प्रश्नहरूको उत्तर दिन जिम्मेवार हुन्छन्।
उनीहरूको भूमिका र कर्तव्य हुन्छ बिरामीहरूलाई सहजै राख्नुपर्दा उनीहरू अस्पतालमा हुँदा। ती सुविधाहरूको वरिपरि तपाईं संग गर्न सक्छन्, जब तिनीहरू कुनै प्रकारको विश्लेषणको लागि जानु पर्छ वा परामर्शमा जानु पर्छ।
घटनामा जब बिरामीले कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्नुपर्दछ, अर्लीलाई लिनको लागि जिम्मेवार हुनेछ ताकि यो कुनै समस्या बिना आयो।
उहाँ सबै कुराको पूर्ण स्थितिमा भएको अवलोकनको जिम्मामा हुनुहुन्छ। केन्द्रमा विसंगति को प्रकार को देख को मामला मा, तपाईं आफ्नो वरिष्ठ लाई यो कुराकानी गर्न को कर्तव्य हो।
जाँच गर्नुहोस् कि केन्द्रको बिभिन्न सामान्य अवस्था पूरा भएको छ। यस तरीकाबाट तपाईले यो सुनिश्चित गर्नु पर्दछ कि दुबै बिरामी र उनीहरुको परिवार अस्पतालमा उचित व्यवहार गर्छन।
वार्डनको अर्को कार्य भनेको कागजात एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्‍याउनु हो। त्यस्तै प्रकारले, उनी पनि बिभिन्न वस्तुहरू बोक्ने दायित्वमा आउन सक्छन् जब केन्द्रका विभिन्न पेशेवरहरूले आदेश दिए।
कहिलेकाँही वार्डनले अस्पताल भित्र निगरानी सम्बन्धी कार्य गर्न सक्छ। यस प्रकारका कार्यहरू प्राय: रातमा रातीको समय बोनस प्राप्त गर्दै गरिन्छ।
हेरचाहकर्ताको अन्तिम कार्य लिफ्टको माध्यमबाट बिरामीहरूलाई भुईंमा पुग्नु हो। यस कार्यका लागि धन्यबाद, बिरामीहरू कुनै समस्या बिना आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सक्दछन्।
वार्डनको स्थिति कसरी पहुँच गर्ने
यदि तपाईं कार्यवाहकको स्थितिमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंलाई यस्तो स्थितिमा पहुँच गर्न तपाईंले कुन आधारभूत आवश्यकताहरूको बारेमा जान्नुपर्दछ:
स्पेनिश नागरिकता छ वा यूरोपियन युनियन को कुनै पनि देश को एक सदस्य हुन।
१ 16 बर्षको भए विपक्ष लिने समयमा।
स्कूल स्नातक छ।
गार्डको कर्तव्यहरू प्रदर्शन गर्न सक्षम हुन प्रश्नमा व्यक्तिलाई प्रमाणीकरण गर्ने प्रमाणपत्र यो व्यक्ति वा अनलाइनमा किन्न सकिन्छ। सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रको वार्डनको रूपमा काम गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विपक्षमा उपस्थित हुनु अनिवार्य छ।
यी प्रतियोगिताहरूमा विशिष्ट पाठ्यक्रममा आधारित सैद्धान्तिक परीक्षा उत्तीर्ण हुन्छ। यदि प्रश्नमा व्यक्ति विपरितहरु लाई पार गर्न सक्षम छ, उसले वार्डन को स्थिति संग सम्बन्धित पक्षहरु को एक श्रृंखला पूरा गर्नै पर्छ, जस्तै समानुभूति भएको व्यक्ति हुनु, संचार कौशल वा उत्तम मानसिक स्वास्थ्य भएको।
छोटो, वार्डनको स्थिति चाहिन्छ कि जो व्यक्ति अस्पतालमा यो समारोह गर्दछ उसले बिरामीहरूसँग समानुभूति देखाउनको लागि सक्षम हुनुपर्दछ र अन्य व्यक्तिसँग कुराकानी गर्न सजिलो हुनुहोस्। सबै एक अस्पताल वार्डन हुन को लागी उपयुक्त छैन, किनकि यो सबै पक्षहरु मा मांग को काम हो त्यसैले यो केहि हुनु पर्छ कि व्यक्ति एक जवान उमेर देखि गर्न चाहानुहुन्छ।
यो याद राख्नु महत्वपूर्ण छ कि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सम्बन्धित सबै पदहरू प्रायः व्यावसायिक हुन्छन् र त्यसैले, व्यक्तिले बाल्यकालदेखि नै उनीहरूको रगतमा बोक्दछ। यहाँबाट, यो एक धेरै रोचक स्थिति हो, जुन सामान्यतया ती मानिसहरूलाई भरिन्छ जो गरीब स्वास्थ्य स्थितिमा रहेका मानिसहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन मजा लिन्छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: गठन र अध्ययन » विपक्षहरू » अर्लीली के हो?